आजको राशिफल – आजको दिन तपाईंका लागि कस्तो रहला ? | Butwal Dainik
२०७८ कार्तिक १८ गते, बिहीवार,
घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ। तर परिस्थिति अनुकूल रहे पनि भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। रमाइलो क्षणमा पनि मन केही उदास रहनेछ। निम्तो प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। बुद्धिको उपयोगले काम सम्पादन हुनेछ। मिहिनेतले आम्दानी बढाउन सकिनेछ। आफन्तसँग सुमधुर सम्बन्धका लागि व्यवहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला।
व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू निकै सक्रिय हुनेछन्। धेरै समय अरूका लागि जुट्नुपर्नेछ। लक्ष्यमा पुग्न निकै संघर्ष गर्नुपर्ला। श्रमपूर्वक समर्पित हुँदा पनि कामको मूल्य कम मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ। हिसाबकिताबमा होसियार रहनुहोला। केही अवसर प्राप्त भए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पर्नेछ।
फाल्गुन २० गते शुक्रबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
आजको राशिफल – २०७८ फाल्गुन ४ गते बुधवार || आज श्री पाथिभरा देवीकाे प्रिय दिन, यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य
माघ ०६ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल शेयर गरौँ